Guddoomiye kuxigeenka Baarlamanfer oo la doortay, Mowliid Macaane iyo Prof. Dalxa oo hankoodii dhicisooway. | Building Momentum
Guddoomiye kuxigeenka Baarlamanfer oo la doortay, Mowliid Macaane iyo Prof. Dalxa oo hankoodii dhicisooway.
Kulan Maanta ka dhacay Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu doortay Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka garabka uu hogaamiyo Madoobe Nuunow Maxamed.
Kulanka oo ahaa mid tan iyo saakay ka socday xarunta Golaha Shacabka, isla markaana xilka Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee isku soo taageen Musharixiin dhowr ah ayaa ugu danbeyn lagu gulestay in lagu doorto Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka.
Musharixiinta Xilkaan isku soo taagtay ayaa waxaa ugu cad cadaa, Mowliid Macaane, Prof. Dalxa, C/fataax Ibraahim Rashiid iyo Cabdulaahi Abuukar Gardawe, iyadoona ugu danbeyn ee xildhibaanada Baarlamaanka doorteen C/fataax Ibraahim Rashiid.
Wareega 1-aad ee doorashada ayaa ahaa mid ay xildhibaanada ku kala hari waayeen, iyadoona wareega labaad ee doorashada, si cad u kala hareen Musharixiinta tartanka ku wada jiray.
C/fataax Ibraahim Rashiid oo Maanta loo doortay Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Garabka Madoobe Nuunow Maxamed, ayaa doorashadiisa ka dib jeediyay Khudbad aad u dheer kaasi oo uu kaga hadlay himilooyinka uu tiigsan doono.
“dalka soomaaliya waxaa dulaystay oo halka uu taaganyahay dhigay dad aan muwaadiniin ahayn iyo kuwa dana gaara leh, waxaan umadda u sheegayaa in Barlamaankaan iyo Saxaafaddaan halkaan taagan ay yihiin dad u dagaalamaaya dalkooda iyo dadkooda ” Ayuu yiri C/fataax Ibraahim Rashiid.
Gudoomiya kuxigeenka 1-aad ee Barlamaanka, waxa uu sheegay in Baarlamaanka uu sii amba qaadi doono howlihiisa shaqo ee horyaala isla markaana cid gaar ah loo joojin doonin buu yiri fadhiyada Baarlamaanka iyo Waajibaadka saaran xildhibaanada.
Kulanka Maanta ayaa kusoo idlaaday jawi aad u degan iyadoona Xildhibaanada Maanta doortay Guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka, horey xilkaan ugu qaadeen C/weli Ibraahim Muudey, oo asiga wali ku dhagan xilkiisa isla markaana ah Garabka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in ay dhacaan fadhiyo kale oo ay Xildhibaanadaan ku dooran doonaan Agaasimayaasha, iyo xubnaha guddiga fulinta Baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada Maanta ayaa kusoo beegmeesa xilli Guddoomiyaha Baarlamaanka uu maanta ka sii dhoofayay magaalada Muqdisho, halka Xildhibaano kale oo ka mid ah labada garab ee is diidan, Aqoon yahano iyo Culima’udiin ay kulan ku yeesheen Muqdisho.